Maqaal: Saameynta Weeraradii Madaxtooyada Iyo Nabad Sugidda. – Bogga Calamada.com
Maqaal: Saameynta Weeraradii Madaxtooyada Iyo Nabad Sugidda.
DACAAYAD AFKA AH OO FICIL LOOGA JAWAABAY.
TACSI LA’AANTA MADAXWEYNAHA.
Dhinaca kale aamusnaanta madaxweynaha ayaa waxaa lagu macneyn karayaa “afkii baa juqda gabay” illeen waxaa loogu yimid gurigii uu ku hoyanayay e’. Marka haddii uu hadlo muxuu sheegayaa? Ma wuxuu leeyahay Afgooye ayaan degayaa? Mise wuxuu leeyahay dagaal ayaan qaadayaa? Mise wuxuu ku booteynayaa Itoobiya iyo Uganda ayaan u dhoofayaa?.
Inta badan wadooyinka waa lasii xannibay iyadoo wadada kaliya ee “DF” iyo ciidamada AMISOM usoo hartay ay tahay Maka-Al-mukarrama, taas oo ciriiriga dartii keentay in habeen hore ay shisheeyuhu KM4 ku toogtaan rag Nabad sugidda ka tirsan oo wadada gooyay.
“1- Sharaxaad sidii ay wax u dhaceen iyo baaxada khasaaraha.